တီအာဝိုင် : ကိုယ်ပိုင်အစွမ်း
ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်က ဆေးဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးတော့ ဆိုဒါကပ်ထူပုံးတွေပေါ်ကျော်ခွတက်ပြီး ဖုန်းတစ်လုံး ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ကောင်လေးဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နားထောင်နေတယ်။ ကောင်လေးက..
အန်တီ…အန်တီတို့ အိမ်ရှေ့ က မြက်ပင်တွေအတွင် မြက်ရိတ်တဲ့အလုပ်ကို ကျွန်တော်လုပ်ချင် လို့ ပါ လို့ စပြောတယ်။ တဖက်အမျိုးသမီးက..အန်တီတို့ ဆီမှာ မြက်ရိတ်သမားရှိပြီးဖြစ်နေပြီ သားရဲ့ လို့ ပြန်ကြား လာတယ်။ ကောင်လေးကလဲ အခုအန်တီတို့ ဆီမှာ လုပ်နေတဲ့သူရဲ့ တစ်ဝက်ခနဲ့ ပဲ ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါ့မယ် ကျွန်တော့်ကို လက်ခံပေးပါနော်လို့ထက်မံ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။
အမျိုးသမီးဘက်က သူအခုရထားတဲ့ အလုပ်သမားနဲ့ အတော်လေးကို အဆင်ပြေတဲ့အတွက် အားရကျေနပ်နာပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်း၊တစ်ခြားဘယ်လို လူကိုမှ ခံ့အပ်ရန်မလိုအပ်တော့ကြောင်းကိုပဲ ဆက်ပြောနေတယ်။ ကောင်လေးဘက်ကလဲ လုံးဝဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့အန်တီ..ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အန်တီတို့ အိမ်မှာ မြက်ရိတ်ယုံတင်မကဘသူးဗျာ…အိမ်ပတ်ပတ်လည်ကိုပါ တံမြတ်စည်းလှဲ သန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးမယ်လေ..ဘယ့်နဲ့လဲ..လို့ ဆက်မေးလိုက်တယ်။ သူဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားပြီး ပြောပြော အမျိုးသမီးဘက်ကတော့ ဘယ်လိုမှ မရနိုင် ကြောင်းကိုသာ အတွင်တွင် ညင်းဆိုတယ်။ ကောင်းလေးလဲ ပြုံးရွှင်တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ပဲ ဖုန်းကိုချလိုက်တော့ တယ်။
ကောင်လေးပြောသမျှကို ထိုင်ကြည့်နားထောင်နေတဲ့ ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ကောင်လေးဆီလျှောက်သွားလိုက်ပြီး သား..မင်းရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အန်တီသဘောကျတယ်…သားကိုအန်တီတို့ ဆီမှာ အလုပ်ခံ့မယ်လေ..သားလုပ်မ လားလို့ ပြူငှာစွာနဲ့ ပြောဆိုလာတယ်။
ကောင်လေးက…ရပါတယ်အန်တီ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ကျွန်တော့်မှာ အလုပ်ရှိပြီးသားပါ၊ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ဘယ်လောက်ထိ ရှိလဲဆိုတာ သိချင်လို့ စမ်းသက်ကြည့်နေတာပါ..အစောက ဘယ်လို ပြောပြော အလုပ်သမားအသစ်မခံ့နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောနေတဲ့အန်တီက ကျွန်တော့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်လေ…လို့ ပြန်ပြော လိုက်တယ်။
“Lady, I will cut your lawn for half the price of the person who cuts your lawn now,” replied the boy.
The little boy found more perseverance and offered, “Lady, I’ll even sweep your curb and your sidewalk, so on Sunday you will have the prettiest lawn in all of North Palm Beach.”
The store-owner, who was listening to all this, walked over to the boy and said, “Son… I like your attitude; I like that positive spirit and would like to offer youajob.”
The little boy replied, “No thanks, I was just checking my performance with the job I already have. I am the one who is working for that lady I was talking to!”
Posted by Nan Shin at 6:44 PM